Uhlelo lwe-TheOneSpy Lokubambisana - Joyina Namuhla Futhi Uzuze i-50% IKhomishana ngayinye Yokuthengiswa
Joyina Uhlelo Lwethu Lokubambisana!
Ukuthembana Okuzokwenza Ucabange ukuthi ungumxhumanisi weTheOneSpy
Ake sijoyine i-TheOneSpy Ukwabelana-Thola okuningi kunokuba ucabange
I-Debut ne-50% Imali engenayo Yabelana ngokuthengiswa ngakunye!
Khetha imigomo nemibandela ethile okukuthandayo kakhulu.
Thola ukuhanjiswa kwakho kokuqala futhi ukhokhelwe yi-TheOneSpy Affiliate Program
Ukulandelela kokuthengisa kufinyelela ezinsukwini ze-30-Amakhasimende alahlekile akwenzeki
Buyisela izinzuzo kumakhasimende agcinwe
Uhlelo oluhle nolumanyanisiwe lwabo bonke ababhulogi
Amaphethini akhokhelwayo akhokhelwayo nezinqubo eziningi zokukhokha
Imisebenzi emikhulu izoguqulwa ibe iBhonasi
Izinguquko eziningi futhi kangcono ukuthi ukhokhwe
Izindlela zokwabelana ngeRevenue Revenue Multi-layer, ukuhlakulela ukuthuthukiswa nokukhula okuvamile
Izenzo ezinhle zizobhekwa futhi zikulethele eziphezulu
Abaphathi abathintekayo abathintekayo bakusiza ukuba uqondise imigomo emisha
Umvuzo Wokudluliselwa Okungaphezulu
Hlanganisa izwe mayelana nohlelo lwe-TheOneSpy lokubambisana futhi uma wenza ukusebenza okuhle kangcono ukuthi ukhokhelwe kusukela emholweni wabalingani bakho bokudlulisela phambili, ngokuqhubekayo.
Izigaba zamalungu amasha & Umenzi Omnandi
Kukhona isango elikhulu lemiklomelo ekhethekile sonke isikhathi ngenkathi esebenza nathi.
I-Debut Bonus -Initiate esheshayo, uthole imali eyengeziwe & nesilinganiso esengeziwe
Izinzuzo zokudlulisela phambili -Usibuyisele othintana nabo abanolwazi futhi uthole umvuzo
Ibhonasi yokusebenza-Izimpumelelo ze-Custom -zinqunywe ekupheleni okuphezulu kwabadlali abakhulu
Abathengi Abathengi Abanzi + Amathuluzi Wokukhangisa esabelweni sakho
Ufuna wena njengomlingani -Kungakho umklami noma unjiniyela, ngakho-ke sinamathuluzi akhethekile.
Amabhanela: Amabhanki azinziwe ngokwezifiso ezinamasayizi amaningi & ama-design (300 +)
Amakhasi ahambayo: Izifanekiso zekhasi lokuthengisa
SEO amagama angukhiye, amavidiyo namaTutorials
Khetha ubuningi bezinto zokuphromotha zokukhangisa
Chofoza kuthebhu engezansi futhi uthole ububanzi obubanzi bezinsiza zokuthengisa ezihambisanayo / amabhanki azo zonke izikhulu. Ungalindi, ubhalise futhi ubone ububanzi obukhulu bokukhetha okuzogcwalisa izidingo zakho zokuphromotha.
Uzothola izinkokhelo zakho njalo ngenyanga, udluliselwe ku-Akhawunti yakho, ithunyelwe nge-transfer transfer, i-PayPal.
Qala ukuthengisa manje! Sebenzisa yonke isiteshi esitholakalayo sokukhuthazwa onakho - iwebhusayithi, iphephandaba, njll! Khumbula - izixhumanisi ezingaphezulu zokudlulisa ozidalayo, amathuba okuningi okudingeka wenze imali kuwebhusayithi yakho!
Ukubuza imibuzo njalo
Akudala noma yikuphi ukuhlupheka kwakho. Inqubo yethu ilula futhi ihlehlisiwe eqinisekisa ukuthi iyasebenza kakhulu; Ngakolunye uhlangothi, ligcina ukulandelela okuhambisanayo ngokuqondile.
Manje chofoza kusixhumanisi esihlangene esinikezwe ku-imeyili noma kuwebhusayithi yakho.
IP ye-isivakashi isivele ingene ngemvume bese i-cookie igxilwe kusiphequluli sakhe esithile ngenxa yokulandelela.
Isivakashi singavakashela iwebhusayithi yethu futhi sivame ukuthenga isofthiwe.
Uma-ke uma imiyalo yezihambeli kune-oda elithile izofakwa esimisweni esifanayo sesiphequluli -I -IP kanye nekhukhi zizogcinwa ezinsukwini ze-30. I-oda lizolandelela izinzuzo zakho.
Sizokwazisa futhi samukele ukudayiswa
Uyafisa ukuthi unayo?
Yini okufanele ngiyenze manje?
Hamba lezi zinyathelo:
Gcwalisa ifomu lokubhalisa ngezansi
Uzothola iziqinisekiso zakho neminye imininingwane ephelele nolwazi
Ngena ngemvume kuphaneli lakho elihlanganisiwe futhi ukhethe kusuka kuzibuyekezo ezihlukahlukene, izixhumanisi zombhalo, amabhanela kanye nezinye izinto zokukhangisa.
Faka ezinye izixhumanisi / amabhansela kumakhasi amakhasi wakho wewebhusayithi ukuze ukhulise ukuthengisa.
Thola ikhomishini kukho konke ukudayiswa okulodwa.
Kufika kumamukeli okhethile ukuthi adlulise ukudluliswa kweBenki / kweWay, i-Web Money, i-BitCoin noma nge-PayPal. Ukukhokha okungenani kuyakuba ngu-$ 300.
Izinkokhelo zingaphathwa kanjani?
Izinkokhelo zenziwa nge-15th nyanga zonke emaDola ase-US.
Ngingakanani okufanele ngikhokhe, ukuba yingxenye yohlelo lwe-TheOneSpy lokubambisana
Cha, akudingeki ukhokhe i-penny eyodwa ukuze ube uhlelo lokubambisana
Ngingakukhuthaza yini nge-PPC "Khokha ngokuchofoza ngakunye"?
Yebo, ungasikhuthaza ngosizo lwe-PPC search engine. Eqinisweni, le ndlela yokukhuthazwa ijwayelekile kakhulu futhi sesiyazi ukuthi iningi lababambisene nabo batusa umkhiqizo wethu ukuthi ungumthombo omuhle kakhulu wokuthola inzuzo. Sifuna kuphela kubantu abangababizi egameni lethu lomkhiqizo we-TheOneSpy.
Ingakanani umuntu angayithola? Ingabe kukhona imingcele yokukhawulela ikhomishini?
Ayikho umkhawulo, lapho uhanjiswa khona futhi uzothola ngaphezulu.
Singakwazi yini ukwenza ikhophi ye-TheOneSpy Review?
Ngokuqinisekile, ungabuyekeza imikhiqizo yethu ngosizo lwezithombe-skrini noma udale ama-video wokufundisa, vele uxhumane nathi futhi sizokunikeza ilayisensi yamahhala yokusebenzisa ngendlela oyifunayo.
Isiphakamiso sabantu bonke ababambisene nabo kakade abalingani bethu abalingani abahloniphekile futhi bathengisa iTheOneSpy, babheke amakhasimende ngangokunokwenzeka noma abe nemithombo eyaziwayo (uhlu lwe-imeyili, iwebhusayithi, isiteshi se-YouTube).
Ukuze uthole ikhophi yokubuyekeza, thumela i-imeyili ku affiliates@theonespy.com kanye nemininingwane:
I-ID Yakho Yobulungu
Izinhlelo zakho zokuvumela (e, g ukukhiqiza ukubuyekezwa kwevidiyo)
Iyiphi inguqulo yefoni ozoyisebenzisa
Ngingazi kanjani ukuthi ngikhokhelwa ngokukhandleka kwami?
Uhlelo lokubambisana esilunikezayo luxhaswe yi-Post Affiliate Pro, isofthiwe yokuqapha esaziwayo. I-Post Affiliate Pro isebenzisa inhlanganisela yekheli le-IP namakhukhi ukuze ulandelele ukuthunyelwa kokuthembeka okukhulu okukhona.
Joyina Uhlelo lwethu Lokubambisana bese Uthola Imali!